TWR360 | BibleProject - नेपाली
BibleProject - नेपाली
रूपरेखा: प्रेरित १३-२८
नोभेम्बेर 29, 2021
हाम्रो प्रेरित १३-२८को रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। प्रेरितमा, येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सामर्थ्य दिनको लागि पवित्र आत्मा पठाउनुहुन्छ किनकि तिनीहरूले संसारभरिका जातिहरूकहाँ उहाँको राज्यको सुसमाचार पुर्याउँछन्। #BibleProject #बाइबल # …धेरै पढ्नुहोस्
रूपरेखा: यूहन्ना १३-२१
नोभेम्बेर 15, 2021
हाम्रो यूहन्ना १३-२१को रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। यूहन्नामा, येशूले उहाँको प्रेम र अनन्त जीवनको उपहार संसारलाई दिनको निम्ति इस्राएलको सृष्टिकर्ता परमेश्वरको मानव अवतारको रूपमा संसारमा आउनुभयो। #BibleProject #बाइबल #यूहन्ना
रूपरेखा: रोमी १-४
नोभेम्बेर 08, 2021
हाम्रो रोमी १-४को रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। रोमीमा, पावलले येशूले आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थान साथै पवित्र आत्मा पठाएर कसरि नयाँ करारद्वरा अब्राहामको परिवार स्थापना गर्नुभयो भनी देखाउँदछन् । #BibleProject #बाइबल #रोमी
रूपरेखा: प्रेरित १-१२
नोभेम्बेर 04, 2021
हाम्रो प्रेरित १-१२को रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। प्रेरितमा, येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सामर्थ्य दिनको लागि पवित्र आत्मा पठाउनुहुन्छ किनकि तिनीहरूले संसारभरिका जातिहरूकहाँ उहाँको राज्यको सुसमाचार पुर्याउँछन्। #BibleProject #बाइबल #प्रेरित
रूपरेखा: यूहन्ना १-१२
नोभेम्बेर 01, 2021
हाम्रो यूहन्ना१-१२को रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। यूहन्नामा, येशूले उहाँको प्रेम र अनन्त जीवनको उपहार संसारलाई दिनको निम्ति इस्राएलको सृष्टिकर्ता परमेश्वरको मानव अवतारको रूपमा संसारमा आउनुभयो। #BibleProject #बाइबल #यूहन्ना
रूपरेखा: लुका १०-२४
हाम्रो लुका १०-२४ को रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। लूकामा, येशूले परमेश्वर र इस्राइलसँगको करारको कथालाई उच्च बिन्दुमा पुर्याउनुहुन्छ अनि गरिब र धनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार घोषणा गर्नुहुन्छ। #BibleProject #बाइबल #लुका
रूपरेखा: लुका १-९
हाम्रो यूहन्ना १-९ को रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। लूकामा, येशूले परमेश्वर र इस्राएलसँगको करारको कथालाई उच्च बिन्दुमा पुर्याउनुहुन्छ साथै गरिब र धनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार घोषणा गर्नुहुन्छ। #BibleProject #बाइबल #लुका
हाम्रो मर्कुसको रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। मर्कुसले येशू इस्राएलका मसिह हुनुहुन्छ जसले आफ्नो कष्ट, मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा परमेश्वरको राज्यको उद्घाटन गर्नुहुन्छ भनेर देखाउँदछ। #BibleProject #बाइबल #मर्कुस
रूपरेखा: मत्ती १-१३
हाम्रो रूपरेखा भिडियो मत्ती १-१३ मा हेर्नुहोस्, जसले पुस्तकको साहत्यिक बनोट र यसको विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। मत्तीमा, येशूले परमेश्वरको स्वर्गीय राज्यलाई पृथ्वीमा ल्याउनु हुन्छ र आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा आफ्ना चेलाहरूलाई जीवनको नयाँ मार्गमा जिउनलाई बोलाउनुहुन्छ । #BibleProject #बाइबल #मत्ती
नयाँ करारको रूपरेखा
हाम्रो नयाँ करारको रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्। यस भिडियोले पूरै नयाँ नियमको साहित्यिक संरचना र यो हिब्रू धर्मशास्त्रको कथालाई कसरी निरन्तर हुँदछ भनि प्रष्ट पार्दछ। #BibleProject #बाइबल भिडियो क्रेडिटस नेपाली भाषामा उत्पादनगर्ने टिम Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ओरिजिनल सामग्री अंग्रेजी भाषामा उत्पादन BibleProject Portland, Oregon, USA
रूपरेखा: मत्ती १४-२८
हाम्रो मत्ती १४-२८को रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले पुस्तकको साहित्यिक बनोट र यसको विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। मत्तीमा, येशूले परमेश्वरको स्वर्गीय राज्यलाई पृथ्वीमा ल्याउनु हुन्छ र आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा आफ्ना चेलाहरूलाई जीवनको नयाँ मार्गमा जिउनलाई बोलाउनुहुन्छ । #BibleProject #बाइबल #मत्ती
फेब्रुवरी 26, 2021
प्रेरित पावलको लागि रोमी साम्राज्यको वरिपरि बौरी उठ्नुभएको येशूको बारेमा सुसामाचार घोषणा गर्दै घुम्न कस्तो अनुभव हुन्थ्यो होला? येशूलाई पछ्याउनेहरूको नयाँ समुदाय प्रत्यक शहरमा स्थापना गर्न उनलाई कुन कुराले चलायो र मानिसहरूले उनको सन्देशप्रति कस्तो प्रतिक्रिया देखाए? प्रेरितको पुस्तकको हाम्रो तेस्रो भिडियोमा हामीले यी सबैका बारेमा अझै विस्तृत खोजी गर्ने छौं। #BibleProject #बाइबल #प्रेरित भिडियो क्रेडिटस नेपाली भाषामा उत्पादनगर्ने टिम Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ओरिजिनल सामग्री अंग्रेजी भाषामा उत्पादन BibleProject Portland, Oregon, USA